जुइसाइटमा रूबी, जबकि कोइनालाईट नाम गरिएको छ - तान्जानियाबाट - भिडियो
रुई zoisite - anyolite मा
जुइसाइट वा कोइलाइट अर्थ र उपचार गुणहरूमा रूबी।
हाम्रो पसल zoisite मा प्राकृतिक रूबी किन्नुहोस्
जुइसाइटमा रूबीलाई, कोइनालाइट नाम दिइए पनि, केन्या र तान्जानियाको अरुशा क्षेत्रबाट खनिज जुइसाइटको एक किसिमको रूपमा विज्ञापन गरिन्छ, कोइओलाइट वास्तवमा एक अन्तर्निहित हरियो जुइसाइट, कालो / गाढा हरियो पर्गासाइट मिलेर बनेको एक मेटामोर्फिक चट्टान हो, जो गलत रूपमा tschermakite को रूपमा पहिचान गरिएको छ, र रुबी जबकि कुनै पनि शब्द एक metamorphic चट्टान को लागि एक आधिकारिक रूपमा स्वीकृत शब्द होईन। यसलाई "हरियो" को अर्थ मासाई शब्द कुनैली पनी भनिन्छ। एनोलाइटलाई जोइसाइट वा टाang्गानिका आर्टस्टोनमा रूबी पनि भनिन्छ।
विपरित रंगहरूले कुनै पनि सामूहिक मूर्तिकला र अन्य सजावटी वस्तुहरूको लागि एक लोकप्रिय सामग्री बनाउँछ। यो पहिलो 1954 मा तान्जानिया लांगोडो को नजिकै मान्डारारा माइन मा खोजिएको थियो।
रूबी गुलाबी देखि रगत रातो रंगको रत्न हो, विभिन्न प्रकारका खनिज कोरुन्डम, एल्युमिनियम अक्साइड। मणि-गुणात्मक कोरुन्डमका अन्य प्रजातिहरूलाई नीलमणि भनिन्छ। रूबी पारम्परिक कार्डिनल रत्नहरूमध्ये एक हो, सँगै नीलम, नीलमणि, पन्ना, र हीरा। रूबी शब्द रबरबाट ल्याइएको, रबरबाट आएको हो। रूबीको रंग एन्टिमेन्ट क्रोमियमको कारणले हो।
जिसिसाइट, यसको बावजूद पहिले नै टाइप गरे पछि, खनिज को एपिडोट समूह को कैल्शियम एल्यूमिनियम हाइड्रोइड हाइड्रोलिक्स हो। यसको रासायनिक सूत्र है Ca2Al3 (SiO4) (Si2O7) O (OH)।
Zoisite prismatic, orthorhombic क्रिस्टल को रूप मा देखा वा विशाल रूप मा, metamorphic र pegmatitic चट्टान मा फेला परेको छ। Zoisite निलो वायो, हरियो, खैरो, गुलाबी, पहेलो, खैरो, वा बेरंग हुन सक्छ। यसमा एक काल्पनिक चमक र असमान फ्रैक्चरको एक श .्कुइडल छ। जब युहेड्रल, जुइसाइट क्रिस्टलहरू मुख्य अक्षसँग समानान्तर बनाइन्छ। मुख्य अक्षसँग समानान्तर पूर्ण क्लीभेजको एक दिशा हो। खनिज मोहन कडाई मापन मा6र7बीच छ, र यसको विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण 3.10 देखि 3.38 मा भिन्नतामा निर्भर गर्दछ। यो सेतो धारण गर्दछ र यसलाई भंगुर भनिन्छ। क्लिनोजोइसाइट Ca2Al3 (SiO4) (Si2O7) O (OH) को अधिक सामान्य मोनोक्लिनिक बहुभुज हो। पारदर्शी सामग्री रत्नको रूपमा बनाइन्छ जबकि पारदर्शी-देखि-अपारदर्शी सामग्री सामान्यतया उत्कीर्ण हुन्छ।
जुइसाइट वा कोइलाइट अर्थमा रूबी र हिलिंग गुण सुविधाहरू
जुइसाइटमा रुबी वा कुनै पनि अर्थ र उपचार सम्बन्धी सुविधाहरूको लाभहरूमा सन्तुलन उर्जा, मानसिक क्षमताहरू बढाउने, दमन गरिएको क्रोधलाई छोड्ने, र भावनाहरू नियन्त्रण गर्ने समावेश छ। ढु happiness्गा खुशी, लगन, र प्रेम को लागी एक भाग्यशाली चिकित्सा क्रिस्टल हो।
जुइसाइटमा रुबी केको लागि प्रयोग हुन्छ?
रुबी साहस र बलको ढु stone्गा हो, र हामीमा दिनहुँ बसेर हुने कुनै डर वा चिन्ता हटाउँदछ। हरियो zoisite को ऊर्जा जीवन को सबै पक्षहरु मा विकास र प्रजनन उत्पादन गर्दछ।
रुबी जुइसाइट कुन चक्र हो?
रत्नले आफ्नो उर्जालाई मुक्ति चक्रको साथ हृदय चक्रमा केन्द्रित गर्दछ।
रूबी zoisite कहाँ खानी छ?
क्रिस्टल उत्तर अंग्रेज तन्जानियाको Longido खनन जिल्ला मा एक अंग्रेजी प्रदायक टोम Blevins द्वारा पत्ता लगाइएको थियो। आजसम्म, तान्जानिया कुनै पनिोलिटको लागि मात्र स्रोत रहन्छ।